မြန်မာနှင့် အိုမန် ဘောလုံးပွဲမှသည် …… ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် အရှုံးများ (ရေးမပြဘဲ မနေနိုင်လွန်းလို့ဗျာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Sports & Recreation » မြန်မာနှင့် အိုမန် ဘောလုံးပွဲမှသည် …… ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် အရှုံးများ (ရေးမပြဘဲ မနေနိုင်လွန်းလို့ဗျာ)
မြန်မာနှင့် အိုမန် ဘောလုံးပွဲမှသည် …… ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် အရှုံးများ (ရေးမပြဘဲ မနေနိုင်လွန်းလို့ဗျာ)
Posted by King on Jul 29, 2011 in Sports & Recreation, Think Different | 16 comments
မနေ့က မြန်မာနှင့် အိုမန်ဘောလုံးပွဲကို သွားကြည့်ဖို့ မတက်နိုင်ပေမယ့် TV ကနေပဲ အားပေးမယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး အားပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … မြန်မာအသင်းရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ အဆမတန် များပြားလွန်းတာကိုလည်း ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးဖွယ်လည်း တွေ့ ရှိခဲ့ရပါတယ် … ကိုယ်တိုင် မသွား ရောက်နိုင်တာကိုတောင် စိတ်ထဲမှာ အားမလို အားမရဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ပင် အပြစ်တင်မိနေပါတော့တယ် … ပွဲမစခင် ပရိတ်သတ်အားလုံးရဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုသံဟာလည်း ကြက်သိန်း တဖြန်းဖြန်းထလောက်အောင်ကိုပင် ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်များ နှိုးထလာပါတော့တယ် … ကွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတ်၊ ကစားသမားများဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ထက်သန် နေကြမလဲ ဆိုပြီး ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်လာပါတော့တယ် (သမီးရည်းစား စထားခါစ ပထမဦးဆုံး ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့် တာထက်တောင် ပိုတယ်ဗျ ) … ပွဲစတယ်ဆိုကတည်းက မြန်မာအသင်းဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့အတူ ကြိုစား ကစားခဲ့ကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ် … မိုင်းအိုက်နိုင်၊ ရန်ပိုင်၊ ကျော်ကိုကို၊ ပိုင်စိုးတို့ရဲ့ တိုက်စစ်အတွဲဟာလည်း လက်ရှိ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှာ ကစားနေကြတဲ့ ခြေစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ကစားသမားတွေဆိုတော့ ပိုပြီး အားတက်နေမိတာကတော့ ဘောလုံးပရိတ်သတ်နဲ့ အတူ ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် … ဂိုးသမားဆိုရင်လည်း လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အကောင်းဆုံးလို့ တင်စားကြတဲ့ ကျော်ဇင်ထက်နဲ့ သီဟစည်သူ တို့ကို ရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ စိတ်တိုင်းလည်း ကျမိပါရဲ့ … ဒါပေမယ့် သီဟစည်သူ တစ်ယောက် လက်ချောင်း အသေးစား ဒဏ်ရာရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း … နည်းပြချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဆန်းဝင်း ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ကွင်းဘေးမှာ ကြီးကြပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ အားတော့ လျော့မိတာ အမှန်ပါပဲ ဒါပေမယ့်လည်း ဦးတင်မြင့်အောင်တို့လို ၀ါရင့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး ဘာသာစကား နားလည်နိုင်မှု၊ လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ကစားသမားတွေထံ တိုက်ရိုက်ချပြ ပေးနိုင်မယ့် မြန်မာလူမျိုး နည်းပြတွေကြောင့် စိုးရိမ်မှုများလည်း အတော်အတန်သင့် လျော့နည်းခဲ့ပါတယ် … နောက်တန်းမှာလည်း ၀ါရင့် နောက်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ (အသင်းခေါင်းဆောင်)ခင်မောင်လွင်၊ မိုးဝင်းတို့နှင့်အတူ ရန်အောင်ကျော် စတဲ့ နောက်တန်းကစားသမားတွေကိုလည်း အားတက်ဖွယ် ကြိုးစား ကစားနေကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ် …. ကစားသမားအပိုင်းမှာတော့ အိုမန် ကစားသမားတွေရဲ့ Skill ဟာ မြန်မာတွေထက် သာလွန်တာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ် (သြော် ငါတို့ ဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေ ကနေ ပွင့်လန်းလာမယ့် နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေ အရွယ်ရောက် လာရင်တော့ကွာ မင်းတို့ကို သူတင်ကိုယ်တင် ယှဉ်နှိုင်မှာပါ အခုဟာက အကယ်ဒမီကနေ ဆင်းလာတဲ့ လူတွေ မပါသေးလို့ပေါ့ကွာလို့ စိတ်ထဲကနေပဲ ကြုံးဝါးနေမိလိုက်သေးတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ လောလောလတ်လတ် U-16 ကစားသမားလေးတွေရဲ့ အစွမ်းအစတွေကို မြင်ထားတော့ နည်းနည်းတော့ လူမသိအောင် စိတ်ထဲကနေ ကြုံးဝါးကြည့်လိုက်တာပေါ့) လူခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး အားလုံး သိကြမယ့် အတိုင်းပါပဲ … ဒီလိုနဲ့ Counter ကနေ အိုမန် ဘောလုံးသမားတွေရရှိသွားပြီး ဂိုးရေ့ ကို ဖြတ်တင်ပေးလိုက်တာကို အိုမန် တိုက်စစ်မှူး အာမက် အလီကနေ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ခေါင်းတိုက် ယူသွားပြီး အဖွင့်ဂိုး ရယူသွားခဲ့ပါတယ် … ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက်လည်း ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ပဲ ခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ် …. ဒီဂိုးကို ကျွန်တော်ဟာ ကွင်းထဲ မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် TV ကနေလွှင့်တဲ့ ဟာ ကို ကြည့်ရတာ လူကျွံ့ အနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မြင်မိတယ် … စည်းကြပ်ဒိုင် အလံထောင်မလား ဆိုပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် ဂိုးအဖြစ်ခွင့်ပြုခဲ့တာကို မချင့်မရဲနဲ့ လက်ခံခဲ့ရပါတယ် ….
အဲဒီဂိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွင်းထဲကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက် ကြည့်ရှု့ အားပေးခဲ့တဲ့ ကာယ ဆရာတစ်ယောက်ကို အခုလို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ ….
” ဆရာ ကျွန်တော်တို့ပထမ ပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုးအပေါ်မှာ ကျွန်တော်က လူကျွံ့ တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် … ဆရာရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြပေးပါအုန်း … “
” ဟုတ်ပါတယ် ညီလေး ထင်မြင်သလို မှန်ခဲ့ပါတယ် … အိုမန်ဘောလုံးသမားတွေ ဘောလုံး ရရှိပြီးနောက် စည်းကြပ်ဒိုင်ဟာ ဘောလုံးနဲ့ အတူ မျောပါသွားသလိုပါပဲ … အိုမန်ဘောလုံးသမားဟာ မြန်မာထက် ခြေတစ်လှမ်း စောပြီး စည်းကြပ်ဒိုင်ဟာ မြန်မာဘောလုံးသမားထက် ခြေလှမ်း ၂ လှမ်းစာလောက် နောက်ကျနေခဲ့ပါတယ် ဘောလုံးကို ဂိုးရှေ့ ကန်တင်ပြီးမှသာ စည်းကြပ်ဒိုင်ဟာ တစ်တန်းတည်း ရောက်လာတဲ့အတွက် လူကျွံဘော ဟုတ်မဟုတ် မသိနိုင်တော့ပါဘူး ဒါ့ကြောင့် ဂိုးအဖြစ် ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် … ဒါဟာလည်း လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားမကင်းနိုင်ပါဘူးဆိုပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို အမှားအယွင်းကင်းစွာ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ် “
ပထမဂိုးပေးလိုက်ရတော့ ပရိသတ်တွေဟာ နည်းနည်းတော့ မကျေမနပ် မချင့်မရဲ ဖြစ်သွားကြပြီး ကိုယ့်အသင်းကိုယ် ဆဲဆို ကျိန်းမောင်း ပြစ်တင် ဝေဖန် နေကြပါတယ် … ဒါပေမယ့်လည်း ခဏအကြာမှာ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ဆိုပြဲီး အားပေးနေလေတော့ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းတော့ ကျေနပ်မိတာ အမှန်ပါပဲ …ဒါပေမယ့်လည်း မကြာပါဘူး စုန်းပြူးတစ်ချို့ ရဲ့ ကိုယ့်အသင်းပေါ် နိုင်ချင်စေတဲ့ စိတ်များအပေါ် လွဲမှားသော ဖိအားပေးမှုများနှင့်အတူ မြန်မာအသင်းဟာ ဒုတိယ ဂိုးဖြစ်စေမယ့် ပင်နယ်တီ ပေးလိုက်ရပါတော့တယ် …. ဒီပင်နယ်တီ ပြစ်ဒဏ်ဘောဟာ အိုမန်အသင်းဘက် အိုမန်နိုင်ငံမှာ ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင် မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ရရှိနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းပါးလှပါတယ် (ဒါတွေဟာ မြန်မာ အသင်းဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ မျက်မုန်းကျိုးခြင်းကို ခံရတာမို့ အထူးအနေနဲ့ ပြောလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်) မြန်မာဘောလုံးသမားအတွေနဲ့ မိမိ အမှားကို သိတဲ့အတွက် (အရင်တုန်းကပွဲတွေလို စောဒကာ မတက်ကြတော့ပါဘူး ၂ ယောက်လောက်ကပဲ အေးအေးဆေးဆေး ဖြေရှင်းသွားတာကို တွေ့ မိပါတယ် … ဒါဟာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းအတွက် တိုးတက်လာသော အလေ့အကျင့်များလို့ ဆိုချင်ပါတော့တယ်)
၂ ဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးမှုများနဲ့အတူ အရာဝတ္တုများကို ကွင်းအတွင်းသို့ ပစ်ပေါက်မှုများ ဆဲဆိုသံများနဲ့ အတူ စတင်လိုက်ပါတော့တယ် ………………. ကျန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကလည်း အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ဆက်လက်မဖော်ပြတော့ပါဘူးဗျာ …
Burma ရေးထားတဲ့ http://myanmargazette.net/57821/uncategorized-other/copypaste ကို ဖတ်ပြီးပြီထင်လို့ ဆက်မရေးတော့တာပါ စာဖတ်သူရဲ့ အချိန်ကို လေးစားသောအားဖြင့် ….
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အာရှအလယ်အလတ်တန်းဖြစ်တဲ့ အိုမန်အသင်းကို မနိုင်လို့ဘာမှ မဖြစ်သွားပါဘူး …
နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြိုးစားလို့ ရသေးတယ်လေ …
စိတ်ဓာတ်တွေ နိမ့်ကျသွားရင် ပြန်လည် မြင့်မားလာအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ ……………………..
ဟိုတစ်လောက ရွာထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ” လူတော်လူကောင်းလား၊ လူကောင်းလူတော်လား “ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ လူကောင်းလူတော်ဆိုတဲ့ ဟာကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး လူကောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ထဲက စလို့ မိဘ၊ဆရာ တင်မကဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ လူတွေကပါ လမ်းမှန်တွေကို ပြပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ….
အခုတော့ အခုတော့ ….. ဘောလုံးပွဲမှာ မြန်မာအသင်းဟာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ် …
” အနိုင်အရှုံးသည် အဓိကမဟုတ် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသည် အဓိက ” …. ” Fair Play “
ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေက အရှုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ဖို့ မရင့်ကျက်သေးတာလား … ဒါမှမဟုတ် အရှုံးကို လက်ခံမပေးချင်တဲ့ အတ္တ စိတ်တွေ များလွန်းတာလား …. ဒါမှမဟုတ် ……………………….
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အသင်းကိုယ် နိုင်စေချင်တာပဲ … ကျွန်တော်လည်း နိုင်စေချင်ပါတယ် နိုင်ငံအသင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ့်လမ်းထဲက ကလေးနဲ့ ဟိုဘက်လမ်းထဲက ကလေး ပြိုင်ရင်လည်း ကိုယ့်ကလေးကို နိုင်စေချင်တဲ့ စိတ် ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ် … ရှုံးသွားရင်လည်း လက်ခံပေးနိုင်ဖို့ ဟိုတုန်းကတော့ အဲဒီစိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ … ကိုယ်အားပေးတဲ့ အသင်းရှုံးနိမ့်ရင် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ ၀မ်းနည်းမိတယ်ပေါ့ဗျာ …
ကိုယ့်အသင်းရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ အသင်းသားတွေ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အပြစ်တင် ဆဲဆိုမယ့် အစား စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ တိုးပွားလာပြီး အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ အားပေးသင့်တယ်ဗျာ …. အခုတော့ ကိုယ့်အသင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်သလို ဖြစ်ခဲ့ရတော့ … ကစားသမားတွေအနေနဲ့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်ကုန်ကာ တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်စွာ မကစားနိုင်ကြတော့ … ဒုတိယအကြိမ် ရှုံးခဲ့ရပါပြီ ………..
ဒိုင်လူကြီးများ၊ တစ်ဖက်အသင်းသားများကို အရာဝတ္တုတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ တတိယအကြိမ်နဲ့ အကြီးမားဆုံး အရှုံးကြီးကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတော့တယ် ……….. ဒါဟာ နိုင်ငံခြားသားများအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးများကို ခြုံငုံပြီး အထင်သေး အမြင်သေး သွားမှာ သေချာပါတယ် … မြန်မာဆိုတာ စည်းကမ်းမရှိသောသူ၊ မယဉ်ကျေးတဲ့သူ၊ အရှုံးကိုလက်မခံတတ်တဲ့လူ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရန်စ စော်ကားချင်သူ … စတဲ့ … စတဲ့ ………….
တစ်ဖန် … ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ရှေ့  မှာတင် အရုပ်ဆိုးဖွယ် ဖိနပ် စသော အရာဝတ္တုများနဲ့ ပစ်ပေါက်တဲ့ အတွက် တိုင်းတပါးသားတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် ဘယ်လို ထင်မြင်ကုန်မလဲဆိုတာ ………………….
ဘောလုံးပွဲဟာ ဆက်မကစားတော့ပဲ ပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် … ရာသီဥတု ကြောင့်လား ၊ ဘာကြောင့်လား အစရှိသဖြင့်ပေါ့ အခုလိုမျိုး ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ဆက်မကစားပဲ ပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကြောင့် …. နောင် နိုင်ငံတကာပွဲတွေအပေါ်မှာရော ကမ္ဘာ့ ဘောလုံးအဖွဲ့အချုပ်ရဲ့  အရေးယူမှုတွေရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် … ကျွန်တော်တို့ဟာ အရှုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် ………………………………………………..
ကြည့်ရတာ.. (၂၀၁၃)ခုနှစ် ဆီးဂိမ်း လုပ်ခွင့်ရဖို့.. အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး..။
ကမ္ဘာ့အဆင့်ပွဲဆိုတော့… နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာ ချက်ခြင်းကိုတက်လာတယ်..။
ဟိုဖက်က အားကစားသမားပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတော့… တော်တော်ကို မကောင်းတာပါပဲ..။
အဲဒီအမဲစက်.. ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဖျက်လို့မရတော့ပါဘူး..။
စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင် စနစ်တကျ ပုံသွင်းခဲ့ကြသူများ … ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့သာ ရှိပါတော့သည် ခင်ဗျား ……..
အဲဒါကြောင့် မြန်မာဆိုရင် တိုင်းတပါးက အထင်သေးတာ၊ အော့ကြောလန်တာ
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကစလို့ စည်းကမ်းတကျ အဆင့်အတန်းရှိရှိဖြစ်အောင် ပြုပြင်သင့်တယ်
ခုဟာက ဘယ်သူ့ကိုမှ လေးစားမှုမရှိသလို၊ ယဉ်ကျေးမှုမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်
မိမိကိုယ်သာ ကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ။ ။ လူတိုင်းအဲဒီစိတ်မွေးလိုက်ရင်…အားလုံး
2013 ဆိုတာ ဝေးလွန်းပါသေးတယ်.. ဇူလိုင်လကုန်မှာကျင်းပရမယ့်ုယူ-၁၉ ပြိုင်ပွဲကိုတောင် လက်လွှတ်ရဖို့ များနေပြီလေ…. ဒါကတော့ ကိုယ့်မြန်မာပရိသတ်ရဲ့ ရိုင်းစိုင်းမှုကြောင့် အခုလို အရှက်ရစရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပခွင့်တွေလည်း ပိတ်ပင်ရတော့မှာပါ…. ဒါ့အပြင် လျော်ကြေးငွေလည်း ပေးရဖို့ရှိနေပါသေးတယ်… ယူအီးအက်ဖ်အေရဲ့ အရေးယူမှုကို ကောင်းကောင်းကြီးခံရနိုင်ပါသေးတယ်
UEFA နဲ.ဘာမှ မဆိုင်။
(အရှုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ဖို့ မရင့်ကျက်သေးတာလား …………….)
အဲဒီလို ခြေခြေမြစ်မြစ် စဉ်းစားဖို့လိုတာပေ့ါ။
Miss Universe ရွေးပွဲတွေမှာဆို ရှုံးသွားတဲ့လူက အနိုင်ရတဲ့လူကို အနမ်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုတာမျိုး ဘယ်လောက် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လိုက်သလဲ။ ဘယ်လောက် အတုခိုးဖို့ ကောင်းသလဲ။ ကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ (သူများကိုချည်း ပြောရုံပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစာနေဆဲပါ။)
အားပါး တော်တော်ကိုရှုံ.ချထားတာပါပဲလား ကိုကင်းရေ. ထားပါတော.ဗျာ မြန်မာပိရိတ်သတ်တွေရိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ ရိုင်းတယ် ဒါပေမယ်. ပရိတ်သတ်တွေ ဆိုးတယ်ဆိုတာ ၅၀% ပဲမှန်တယ်လို.ယူဆတယ်ဗျာ ကျနော်.ရဲ.ဒီရွာထဲက အစ်ကိုအစ်မတို.အဲ.ဒီပွဲသွားကြည်.ဖြစ်ကြလား မကြည်.ဖြစ်ရင် ပွဲထဲ မရောက်ခင် အပြင်မှာဖြစ်နေတာလေးတွေနည်းနည်းနားစွင်.လိုက်အုံးဗျာ ဒီမှာလင်.လေးတွေရှိတယ်
ကျွန်တော် မြန်မာ ပရိတ်သတ်အကုန်လုံးကို ဆိုးတယ်လို့ မပြောခဲ့သလို အားလုံးကို ကောင်းတယ်လို့လည်း မပြောမိခဲ့ပါဘူး … ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုသာ ချပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ….
မြန်မာပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု ဟာ အင်မတန် ရှက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ဘောလုံးကန်ရင် အနိုင်ကို မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ ရှုံးလာရင်လည်း သဘောထားကြီးစွာနဲ့ လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ အနိုင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် အရှုံးကို သဘောထားကြီးစွာ လက်ခံပြီး ဘာကြောင့် ရှုံးရတာလဲ ဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ အဂတိ မလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုသင်ခန်းစာ ယူနိုင်ဖို့ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာ ဗဟုသုတ လုံလောက်အောင် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနည်းပညာတွေ မရှိပဲ သင်ခန်းစာ ယူရင်လည်း အကျိုးမများနိုင်ပါ။
ဒီလို အားပေးတဲ့သူတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို ကမ္ဘာအလယ်မှာ ခေါင်းမဖော်ရဲအောင် နိမ့်ကျတဲ့စိတ်ဓါက်ကို ပြလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲ။ ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတာနဲ့ တူတူပါပဲ။
ဒီ့အတွက်ကြောင့် ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့
အချိုးမပြေတဲ့ လုပ်ရပ်တွက် ကျုပ်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်
ဒီတော့ကာ ဘာမှ ပြောမနေနဲ့
ရှိတဲ့ စောက်ခွက်တွေ အကုန်ဆွဲစိပြစ်
ကျုပ် အဘ ဖြစ်ရင် ကျုပ်အဘလဲ စီပြစ်
နိုင်ငံတကာ က ဗမာဆိုရင် အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒို့ရွှေမြန်မာများကလည်း နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ လူ့ယဉ်ကျေးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြသဖို့လိုသလို ၊ ကွင်းအုပ်ချုပ်သူများ၊ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ကိုယ့် မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းတွေကို ခုလိုခွေးတိုးပေါက်ကနေ ခိုးဝင်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေသင့်ပါဘူး.. နောက်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ စကားချိုချိုသာသာနဲ့ ဖြောင်းဖျပြောဆိုတောင်းပန်ရင် အိမ်မှာတောင်ထမင်းဖိတ်ကျွေးချင်တဲ့ စိတ်ရှိသူတွေပါ…ဒါကို ပါဝါတွေ၊အာဏာတွေနဲ့ဆိုတော့ အရှက်ရစရာတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပေါ့..
ထားခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ ကတိတွေ…
ဘာကြောင့်ဆို..အင်္ဂလန် လိုနိုင်ငံမှာတောင် ဖြစ်သေးတာပဲ.. ခင်ဗျားတို့ အပြစ်တင်ရင်.. အင်္ဂလန်လည်း အပြစ်တင်ကြပေါ့.. အောက်တန်းကျတယ်လို့..
မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ မပြောသင့်သလို.. ဖြစ်သင့်တယ်လို့လည်း ပြောမရပါဘူး..
လုပ်သွားတဲ့သူတွေမှာ အပြစ်ရှိတယ် ဆိုရင်…
စစ်တပ်ထုံးစံအရ အရာရှိမှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်….
ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်.. နစ်နာသွားတာတွေက ဘာတွေလဲ..
အရေးသာ သွားတာက ဘာတွေလဲ..
အကောင်းနဲ့ အဆိုးသာ ဒွန်တွဲ နေကြစတမ်းဆို…
အဆိုးထဲက အကောင်းလည်း သေချာပေါက် ရှိနေမှာပါ…
မြန်မာတွေ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ဆိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး..
အမှိုက်ပစ်တဲ့ နေရာလည်း စည်းကမ်း မရှိကြပါဘူး..
ဘယ်သူတွေမှာ အပြစ်ရှိသလဲ ဆိုတာ သေချာဖို့ လိုသလို..
ဒီအကြောင်းပေါ် အခြေခံပြီး.. ဘာတွေကို ပြုပြင်မလဲ တွက်ဆဖို့လိုပါမယ်..
ကစားသမား.. နိုင်ပွဲရရှိရန်.(မျှော်လင့်ချက်).. ကွင်းလုံခြုံရေး စနစ်.. (အင်အားထပ်ဖြည့်တာမျိုး မဟုတ်)
နောက်ဆုံး…နောက်ဆုံး.. စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ဖို့… အခြေခံပညာရေးက အစ..
ပြည်သူတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်လာဖို့… စားဝတ်နေရေးနဲ့ စီးပွားရေးက အစ..
ဟိုလူ ဒီလူ အပြစ်တင်တာလည်း တင်ကြ.. အဖြေလည်းရှာမှ ပါ….
ကျုပ်တို့ဆီ အကျင့်ပါတာက.. အပြစ်တင်ပြီး. အပြစ်ရှိသူ အပြစ်ပေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ ထင်ကြတာ..
ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကြတော့ မေ့နေကြရော..
အကျိုးကောင်းချင်.. အကြောင်းပြင်…. ကျုပ်တော့ဖြင့် အဲဂလိုပဲ ထင်မိ..မြင်မိပါကြောင်းဗျာ..
ကျုပ်တို့ဆီ အကျင့်ပါတာက.. အပြစ်တင်ပြီး. အပြစ်ရှိသူ အပြစ်ပေးလိုက်ရင် ပြီးပြီ ထင်ကြတာ..
ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကြတော့ မေ့နေကြရော..
ဂျင်ကလိ ပါ ပါလာတယ် ဆိုတော့ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပြီး လာတဲ့လူတွေပဲ
နောက်ဆုံးတော့လဲ xxxxx တွေဆိုပြီး နာမည် ထွက်မှာပါ
အပြစ်တင်တာ အပြစ်ရှာတာ လွယ်ကူလှပါတယ် …
အဖြေရှာပြီး ဘာတွေ ဆက်လုပ်မယ် ဆိုတာသာ …………………
ဟိုလူ့အပြစ် ဒီလူ့အပြစ် …
ခေါင်းဆောင်အပြစ် … လူကြီးအပြစ် … သာမန်လူတန်းစားအပြစ် … အားလုံးအပြစ် ….
လို့ ပြောမနေကြတော့ပဲ … ………………………
ငယ်စဉ်ဘ၀ နယ်မှာ ကျောင်းနေတုန်းက နိုင်ငံတော်သီချင်းပြီးရင် ဆိုမိတဲ့ …
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် …